Ulawulo lweempendulo ze-imeyile | Martech Zone
Ulawulo lweempendulo ze-imeyile
NgeCawa, ngoMatshi 25, 2007 Douglas Karr
Izolo ndibethile. Andiqinisekanga ukuba impilo yam isebenza njani na, kodwa ndithanda ukusebenza ngesantya somsebenzi. Ndisebenzile abafundi bam abambalwa ngale ndlela, nam… ndisiya kubusuku obambalwa ndingakhange ndilale ukugqibezela iprojekthi. Emsebenzini, sithatha amanyathelo amaninzi. Kubonakala ngathi ndithatha umsebenzi omninzi kunye neshedyuli esele igcwele. Xa kwafika uMgqibelo, ndankqonkqoza ii-imeyile ezimbalwa emva koko ndachitha imini yonke (kunye phezolo) ndisozela okanye phambi komabonwakude ndikwimeko yokutya. Ngaba le yindlela ozifumana uzifumana usebenza ngakumbi nangakumbi?
Olunye lwezinto zokujonga uluhlu lweempelaveki yayikukujonga i Ulawulo lweempendulo ze-imeyile ishishini. Imvelaphi: Ulawulo lweMpendulo ye-imeyile yitekhnoloji esecaleni eseva evumela iinkampani ukuba zizame ukucoca, ziququzelele, kwaye ziphendule kwii-imeyile ezingenayo kwiidilesi ezingaqhelekanga ze-imeyile. Imizekelo inokuthengiswa @ okanye inkxaso @ kwinkampani yakho.
Inani lezicelo ngaphandle apho liyamangalisa! Ndijonge ukubona abanye abathengisi kwi-Intanethi abakwenzayo. Kumzi mveliso weNkonzo ye-imeyile, uLawulo lweeMpendulo ze-imeyile ludla ngokuba ngumsebenzi wesibini ngoko ke asikhuphisani naba bantu kwaye asinabunzima beenkqubo abazenzayo.
Ngeenkqubo zolawulo lweempendulo ze-imeyile, ndingafaka isicelo sokukhangela amagama aphambili kwisifundo nasemzimbeni ukuhambisa i-imeyile yam kumntu ofanelekileyo. Ndingaphendula kwakhona kwi-imeyile kwangoko ngomyalezo owenziwe ngokwezifiso. Umzekelo omnye: Ndingayithumela nge-imeyile inkampani kwaye ndibuze ukuba banayo API kunye nenkxaso kubathengi bamaShishini. Inkqubo yokuLawulwa kweMpendulo ye-imeyile iya kuhamba ngokuzenzekelayo i-imeyile kubantu abathengisayo abajongana namathemba oShishino abafuna API inkxaso.
Kananjalo, ndingafumana impendulo entle nge-imeyile endixelela ukuba bayifumene i-imeyile yam kwaye umntu othile uza kuqhagamshelana kungekudala… okwangoku, nceda ujonge la manqaku kunye neminikelo kwi-Intanethi. Ngaphakathi kwamakhonkco kukho amakhonkco omxholo kwiShishini kunye API amanqaku kunye neminikelo kwiwebhusayithi enokunceda abathengi. Kumaqela enkxaso, ezi imeyile zempendulo zinokuba namanqaku esiseko solwazi abhalelwe imiyalezo ethile yempazamo, njl njl.
Ngaphandle kokwazi, sonke sifumene ii-imeyile kwezi nkqubo. Ukuba unamava ngokuthe ngqo nabanye baba bathengisi okanye usetyenziso, Ndiwise umgca. Ndinomdla ngakumbi ukuba ngaba yi SaaS isisombululo. Ndingathanda ukuba singaphindi silivuselele ivili xa sijonge ukwandisa amandla ethu.
Amaphephandaba awafanga, ukuthengisa iindaba kufile
Mar 25, 2007 ngo-11: 08 AM
Ndizifumana ndinguDoug ukuba ndinokufumba emlilweni iiveki zilandelelana kodwa ke imini izakufika kwaye ndidiniwe nje .. ndidiniwe .. kwaye xa oku kusenzeka ndingazifumana ndilala ndize ndicime usuku olulandelayo okanye ezimbini.
Nje ukuba ndiyenze loo nto ndinokubuyela kwishedyuli "yesiqhelo"
Mar 25, 2007 ngo-11: 18 AM
Ndiyavuya ayindim ndedwa, Steve!
Mihla le yeveki
Mar 25, 2007 ngo 1:06 PM
Ndiqala ukuyifumana loo nto .. Ndicinga ukuba ndenza indlela yokuya .. ndicinga ukuba sonke kufuneka sinciphise isantya 🙂
Meyi 11, 2011 kwi-7: 07 AM
I-imeyile iyimfihlo, enkulu okanye amashishini amancinci asebenzisa i-imeyile, isixhobo esilula nesingabizi, Inkonzo esebenzayo yokulawula imeyile iya kukhokelela ekufikeleleni kwishishini lakho kubathengi bakho.